Okuphezulu Ngexabiso eliphantsi-Izikhokelo zokuthenga zokuthenga ngexabiso eliphantsi kwi-intanethi
Ukhathalelo loBuqu kunye neMpilo
Izixhobo kunye neentambo
ITV kunye neVidiyo
Fumana into oyifunayo phakathi kwazo zonke iindidi zethu
Ukuba ufumana kunzima ukufumana isikhokelo sokuthenga imveliso ethile, ungasebenzisa i-injini yethu yokukhangela, eya kuhluza amawaka ohlalutyo esilwenzileyo ukuzama ukukunceda.
Uninzi lweendidi ezidumileyo
Umgodi wesanti wabantwana
Ukhathalelo lomntu kunye nempilo
Okungakumbi kwizinto zombane
Senza ntoni kwi-Baratos ephezulu?
En Ixabiso eliphantsi sibatyala kubasebenzisi bethu. Sifuna ukuba ukwazi ukufumana uphononongo olunyanisekileyo kunye nezimvo zeemveliso kuhle kwaye kutshiphu ukuba ufuna ukuthenga. Ngezikhokelo zethu zokuthenga, uya kufumana umbono ocacileyo wento kanye oyifunayo, uhlala ubeka phambili ixabiso lemali.
Ukongeza, sifuna ukukwazi ukukunceda ngayo nayiphi na imveliso, kulo naluphi na udidi. Ewe ningabazali nikhangela ezona mveliso zibalaseleyo zomntwana wenu, nilungile uphambene yeekhompyuter ezijonge ezamva nje te knoloji, kwi-Top Baratos sicinga ngawe.
Uya kufumana ntoni kwiBaratos ephezulu?
Izikhokelo zokuthenga zamva nje
Jonga kwi izikhokelo zokuthenga zamva nje esikwenzileyo:
Umphezulu ophantsi 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies